Izintandokazi zeFoel-Efficient Cars
Iimoto neekhekhi Uphononongo
10 I-Fuel efanelekileyo Imoto Uyakuthanda kuDrayivu
by UAron Gold
Iminqweno yam Intando ye-Fuel-Efficient Cars
Ifoto © Aaron Gold
Ifilosofi yam malunga neemoto ezisebenzayo zokuhamba kwamanzi kukuba umntu akufanele akhiphe umqhubi wokuzonwabisa ukuze nje ugcine umbane. Yingakho oku akusiyo nje uludwe lweenombolo zeemoto ezinobuncwane obutyebi bomhlaba (oya kufumana apha ). Endaweni yoko, ndidibanisa uluhlu lweemoto endicinga ukuba ziyolonwabo kakhulu kwiintlungu. Nazi apha, ngo-alfabhethi.
BMW 528i. Ifoto © Aaron Gold
I-MPG ye-MPG / 34 iPGG / 27 MPG idibene
Yona imoto eyangena kwi-Inner i-Cheapskate yonke iyatshisa kwaye ibuhlungu: i-yacht enkulu yezemidlalo ehamba ngezemidlalo efumana uqoqosho oluthile olufana ne-Honda-cylinder ye-Honda Accord. Imfihlo ye-528i iyinjini yayo entsha, i-cylinders encinane ye-2-litre ezine ezine-injection fuel and turbocharger, ehlangene kunye nokukhupha i-horse-power kunye ne-260 lb-ft ye-torque - enye ye-hp kunye ne-lb-ft ngaphezu kwe-3 -liter injini ye-cyilinder engama-528i kunyaka odlulileyo. Ukukhawuleza kunele ngokwaneleyo; Enyanisweni, ngaphandle kwesinjini esilungileyo - i-buzz ephucukileyo ebonakala ngathi ayikho kwindawo yemoto ephathekayo -iyo, awuyi kuphinda ulahleke loo miqulu engaphezulu. I-528i ine-Eco Pro yokuhamba kwimodi, kunye ne-auto-stop system evimbela injini kwiindawo zokukhanya. Inkqubo yokumisa imoto ayilungele ixesha eliphambili, kodwa i-Eco Pro ikunceda ukuhlahlisa kunye ne-gas mileage up - ndiyisebenzise ukunceda kumyinge wama-26.3 MPG ngexesha leveki yokuvavanya, inani elimangalisayo lemoto enjengeli 5-uchungechunge.
Funda uhlaziyo olupheleleyo
I-Chevrolet Sonic Turbo
I-Chevrolet Sonic Turbo. Ifoto © Aaron Gold
29 IMG idolophu / 40 MPG umgwaqo / 33 MPG (incwadi)
27 iPG ye-MPG / 37 / MPG umgwaqo / 31 MPG (ngokuzenzekelayo)
Ukuba ungacingi ukuba mnandi kakhulu kwiqela le-MPG le-40, ndincoma ukuba uvavanye ukuqhuba i-Chevy Sonic Turbo. Ndiye ndicinga ngale moto njengoko iVolkswagen GTI yindoda ehlwempuzekileyo - inesitayela kwaye ngokuqinisekileyo ine-spunk. Ukuze ufumane umxhesho ophezulu kunye nobunzima, yeqa injini ye-1.8-liter yesitampu kwaye uhambe kwi-138 hp 1.4-litre turbo. Akuyiyo iHEMI V8 ngqo, kodwa ngokuqinisekileyo iyazama ukuhamba kwayo, kunye ne-6-speed speed transmission yonikezela inxaxheba kakhulu kunye noqoqosho olufanelekileyo. Ndandimangaliswe kwimizila yegesi - nangemva kweveki yokuhamba nzima kwi-turbo ukukhuthaza, kuquka ukubetha ngokubanzi kwi-About.com Top Secret Secret Curvy Test Road, ndilinganiselwa kuma-36 MPG. Ngoku, le yindlela yokugcina umbane!
Fiat 500 Abarth. Ifoto © Aaron Gold
I-MPG ye-MPG / 34 / MPG / 31 MPG idibene
Njengokuba ndiyazi, uqoqosho lwamafutha aluyinye yeenjongo ze-Fiat 500 ze-Abarth, kodwa yiphumo elincinci le-500 elincinci. I-Fiat yongeze i-turbocharger kunye ne-pair of intercoolers kwi-injini ye-1.4-litre ye-500 kunye ne-MultiAir entsha eyenza ukulawula i-valve ukulawula ngaphezu kwezinye iindlela zokutshintsha i-valve-time-enabled curve. ubukhulu obuncinane. Into enye i-Fiat ayinayo ingumngciphekisi, ngoko ityala elikhulu lokukhupha ixilongo eliyingxenye ebalulekileyo yamava e-Abarth. Ukumiswa okomeleleyo kuka-Abarth ka-500 kukubonelela ngokusingqongileyo ngaphandle kokukhwela ngokukhawuleza komqhubi walo oyintloko, uMbutho we-MINI Cooper S, kwaye kukho nenye imsila-igugile phantsi kwe-braking enamandla eyenza inxalenye yengozi. Ewe, kwaye ngaba ndandikhankanya ukuba ifumene i-gas eyiyo?
Ford Fiesta. Ifoto © Aaron Gold
I-MPG ye-MPG / 40 ye-MPG / 33 MPG idibeneyo (ngokuzenzekelayo)
Kukho izinto ezininzi endithandayo ngeFransi Fiesta: Yincinci, ayithengi, inamanani obuntu, kwaye i-fuel-efficient - kunye neChevy Sonic Turbo, iyona nto inomdla kakhulu kwi-club ye-MPG ye-40. , kwaye ngokungafani ne-Sonic turbo, iphumelela kwi-MPG ye-40 yesilinganiselo ngokuhambisa ngokuzenzekelayo. Ukutshintshwa kwe-twin ye-twin ye-twist clutch yoluhlobo olwenzelwe iimoto zezemidlalo, okwenzekayo ukubuyisela i-gesi ye-mileage enkulu. I-Fiesta inomdla omkhulu kumgwaqo okhuniweyo, kodwa ndifumene nje ukuba ndiyothusa ngokukhawuleza kwindla yokutya. Kulungile, nansi ukuprinta okulungileyo: Ukuze ufumane i-MPG yesilinganiselo se-40, kufuneka uthenge imodeli ye-SE uze udibanise iphakheji ye-Super Fuel Economy ye-$ 695 - kodwa -i-SFE Fiestas isabalwa kwi-29 MPG idolophu / 38 incwadi kunye ne-29/39 kunye ne-othomathikhi, kwaye bayonwabile ukuqhuba.
IGesi Civic Natural Gas
IGesi Civic Natural Gas. Ifoto © Honda
27 iPG City / 38 MPG umgwaqo / 31 MPG idibene
Ukuqhuba iGesi yeNdalo yemvelo yenye yeendlela endithanda ngayo ukusindisa i-petroli kuba ayisebenzisi nayiphi na i-petroli. IGesi yeNdalo yendalo igxininisa igesi yendalo (CNG), engabizi, ininzi, kwaye iphephile kunepetrololine. Itshisa ngokucoca kwaye ayifuni inkqubo enobungozi obunzima okanye izixhobo ezikhuphayo zokukhupha. I-Honda iphinda iphinda ivuselele i-CNG-ekhutshwe ngezobuGcisa ngo-2012; ngoku sele ikhona kuwo onke ama-50 kwaye ingaba nenkqubo yokuhamba ngee-CNG izitishi ezicwangcisiwe kuyo. Uluhlu lwayo luphantsi kweemoto ze-petroli, kodwa andinayo ingxaki yokwenza uhambo olungamayela angama-900 phakathi kweLos Angeles neSan Jose kwinguqudala (ebizwa ngokuba yi-Civic GX). I-Civic Natural Gas iyanciphisa ukungcola komoya, inciphise ukuxhomekeka kwethu kwioli, kwaye iyanciphisa iindleko zakho zeoli. Ngaphandle koko, zingaphi izithuthi ezikubeka kwindawo yokujonga phantsi kubaqhubi be-Prius njenge-petroleum-swilling, ukungcola-ukungcolisa i-troglodytes?
2011 Honda CR-Z. Ifoto © Honda
Idolophu ye-MPG ye-31/37 ye-MPG / 34 i-MPG idibanise (i-manual)
Isixeko se-MPG esingama-35/39 MPG / 37 MPG idibeneyo (ngokuzenzekelayo)
Ndiye, ukunyaniseka - kwandithatha ixesha elithile ukufudumala kwi-CR-Z, ngokukodwa ekubeni ndine-CRX, eyona yandulela ngokomoya i-CR-Z. Kodwa ixesha elininzi lokuhlala, ndandithanda kakhulu le moto. Amandla anesizotha, kodwa i-CR-Z ine-chassis engaxilanga ngokungahambisani nento eya kuguqula (ukugqithisa ngaphezulu) xa uphakamisa i-throttle kwikona yokuzila, kunye ne-multi-mode hybrid system yenza ukulinganisa ngokufanelekileyo kwe-CRX yezemidlalo. Imodi yezemidlalo kunye ne-CRX HF engenazinambuzane kodwa esebenzayo kwimodi ye-Econ. Kwaye kufana neyokuqala, kulula ukupaka kunye neyithani yegumbi lokuthengisa. Kukho ukuhla; Ukukhawuleza kuluhlu olulungileyo kunye nokuthunyelwa kweencwadi, okuyiyona nto inomdla ngamaphuzu amaninzi, iyanciphisa ubuninzi bombane ngesantya esifanayo. Kwinqanaba, nangona kunjalo, i-CR-Z iyindawo efanelekileyo yokuhamba ... nangona kukho into enokuyithatha.
Hyundai Elantra. Ifoto © Aaron Gold
I-MPG ye-MPG / 40 ye-MPG / 33 MPG idibanise (i-auto / incwadi)
Kukho izizathu ezininzi endiyithandayo i-Hyundai Elantra: Kukhangeleka kakhulu, kunempahla enhle, kwaye ihamba njengemoto ebiza kakhulu. (Okokuthi, ngexabiso lika-Elantra liqala ngaphantsi kwe-$ 16k, iimoto ezininzi zihamba ngeemoto ezibiza kakhulu.) Kunzima ukukholelwa kwiingcambu ezithobekileyo ze-Hyundai, kodwa i-Elantra ngokwenene yenye yezona zinto zihamba phambili kwiimarike-kunye noqoqosho lwayo oluhle kakhulu nje ukugcoba kwikhekhe. Ndivile kubabunikazi ababenenkathazo yokufikelela kwi-MPG engama-40 kwiNdlela enkulu, kodwa ndafumanisa ukuba ukuba ndibeka ulawulo lokuhamba ngeenqanawa okanye ngasentla ngaphezu komda wokukhawuleza, ndiyakwazi ukunamkela lula i-Elantra kuma-40s aphantsi. Le moto imele ipakethe epheleleyo.
Kia Optima. Ifoto © Kia
I-MPG ye-24 / i-MPG / 28 i-MPG idibene (2.4 i-othomathiki)
I-MPG ye-MPG / 34 ye-MPG / 26 i-MPG idibene (2.0 turbo)
Ukuba ndiza kuthenga i-sedan yobukhulu bendawo, ndiqinisekile ukuba bekuya kuba yi-Kia Optima. Ndiyayithanda isitayela, ndiyathanda indawo, ndiyayithanda impawu kwaye ndiyayithanda intengo. I-Optima yenza into esiyilindeleyo kwi-sedan yobukhulu bendawo, kwaye yenzayo kunye ne-panache-kwaye ke kukho uqoqosho oluhle kakhulu, endibonayo njengebhonasi eyongeziweyo. Enyanisweni, ndiza kulingelwa ukuba ndilahle i-MPG emibini kwaye ndifumane inguqu ye -200 hp turbocharged version , eyongeza amandla amaninzi kodwa isebenzisa i-gas engaphezulu.-p>
Mazda3 SKyActiv. Ifoto © Aaron Gold
Idolophu ye-MPG ye-27/39 ye-MPG / 31 i-MPG idibanise (i-manual)
28 IMG idolophu / 40 MPG umgwaqo / 33 MPG idibeneyo (ngokuzenzekelayo)
Ndandixhalabile nge-Mazda3 ehlaziywayo ka-2012: Ndandivuyiswa kukuba bongeze entsha ye-MPG SkyActiv engama-40, kodwa ndadideka ukuba bayanciphisa ingaphakathi. Emva kwayo yonke into, ukuziva okungahambi kakuhle kwintengiso ye-2010-2011 i-Mazda3 yinto yam endiyithandayo ngemoto. Kodwa ke ndafumana ukuhlaziywa oku-3 kwindlela ekhethiweyo, kwaye konke kwaxolelwa kuba kuseyinto emnandi ukuqhuba - ngokugqibeleleyo, ukuzonwabisa. Nangona i-litany yezinto ndingayikhalaza ngayo-i-dash-cost cost, isihlalo esincinci se-back, into yokuba i-SkyActiv injini yindlela eyongeziweyo-xa nje i-Mazda3 ifana nayo, iya kuhlala ibe yenye yam intandokazi.
IToyota Prius v
I-Toyota Prius v. Ifoto © iToyota
I-MPG ye-MPG / 40 MPG / 42 MPG idibene
Ndiphantse ndiziva unetyala elincinci ukubeka i-Prius v kuleluhlu. Emva koko, ndiyindoda yemoto, kwaye i-Prius kakhulu inxamnye nayo yonke imoto imoto imele ... kodwa, ukuvuma, le nto iyinto ecocekileyo-imoto enikezela ngokwenene indawo yeSUV kwaye ifumana ama-40- kunye ne-MPG. Akunjalo i-MPG engama-40 kwinqanaba lomgwaqo omkhulu kunye nokulawulwa kweenqanawa ezibekwe kwisantya sokukhawuleza, khumbula; i-forty-plus elula ekuqhubeni ukuxuba. (Ndineminyaka engaphezu kwe-46.) Kwaye kunzima kakhulu ukuhamba kwendlela, i-Prius v yegesi mileage ihamba phambili. Ewe, kusenokuba yinto encinci ekutheni inzondelelo ijikeleze iindlovu, kodwa ukufikelela kweso sithuthi esikhulu, esinokuqhaqhayisa imoto yinto enokuzonwabisa. Ndingumfana!
Uhambo lwe-Honda Civic tour photo ngo-2016
Uhlolo lweMveliso: iSlime iTyalant Sealant
Konke nge-Yamaha Viking VI EPS
Iimoto eziphezulu zeMom
Ngaba Imifanekiso Eninzi okanye Encinci Ithengisa Ngaphezulu?
Energy Kinetic Inkcazo
Iintsuku ezisixhenxe zeNkosana zeNkosana
I-Post-Contractual Opportunism kunye neMida yeFirm
Isikhokelo kwiiNkcazo zobungakanani
Yintoni i-Braking Regenerative Braking?
Ikhokelo Eboniswayo KwiiMoto zeeTeksi
Iipropati zeMichiza kunye neZakhiwo zePhysical